Ogaden News Agency (ONA) – Sanadguuradi JWXO oo London ka dhacday, Gudomiyaha Xarunta dhexe JWXO iyo Abwaan Heelale oo ka qeybgalay
Sanadguuradi JWXO oo London ka dhacday, Gudomiyaha Xarunta dhexe JWXO iyo Abwaan Heelale oo ka qeybgalay
Jaaliyada Ogadeniya ee London oo u dabbaal dagtay sanad guuradi 29aad ee kaso wareegtay aasaski jabhada wadaniga xoreynta Ogadeniya. Sanad guuradan oo ka dhacday Madasha shirarka ee xafiiska Jaaliyada Ogadeniya.
Xafladan ayaa waxaa kasoo qeyb galay qeybaha bulshada ee jaaliyada Somalida Ogadeniya ee London. Iyada oo lagu casuumay Gudoomiyaha xarunya dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya Naftii Hure Cabdi kariim Sheekh Muuse iyo Abwaanka gabayaaga caanka ah ee Abwaan Heelaale.
Shirka ayaa waxaa furay Gudomiyaha Jaaliyada Ogadeniya ee London Halgame Cabdi Casiis oo halkaas hambalyo u diray shacabweynaha Ogadeniya, Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadeniya iyo dhamaan Jaaliyadaha Ogadeniya ee dibada iyo caalamka ku baahsan. Gudomiyaha ayaa hambalyadaas ka dib soo jeediyay qodobadii shirka oo ka koobna,
Qudbada Taariikhiga ahey oo uu soo jeediyay Cabdi Kariim sheekh Muuse
Gabayo cusub oo Abwaan Heelaale ka tiriyay sanadguurada
Taariikhda Ogadeniya oo uu soo jeediyay Halgame Mustafe
Waxyaalihii u qabsoomay Halganka 29kii sanno oo uu soo jeediyay Xaaji Cusmaan Badal
Munaasabada Xafladan ayaa sidii caadada aheyd waxaa lagu furay wacyi diini ah iyo aayado quraan ah oo halkaas uu kasoo jeediyay Xaaji Daahir Tamuuje. Kadibna waxaa laguda galay qodobadii shirka
Shirkan sidaan kor ku xusnay waxaa kasoo qeybgalay Xarunta dhexe ee jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeniya gudoomiyaha ciidanka Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeniya naftii hure Cabdi Kariim Sheekh Muuse oo u hanbalyeeyay Jaaliyada London oo xusaysay Sanad guurada 29aad ee kasoo wereegtay Aasaaski JWXO. gudomiyaha ayaa sidoo kale u hambalyeeyay shacabweynaha Ogadeniya dibad iyo gudeba.
Naftii Hure CabdiKariim Sheekh Muuse waxa uu si aad u faah faahsan uga waramay marxaladihii Halganka Ogadeniya kusoo bilaabmay iyo cududiidsa aan la wiicin karin ee waqtigan uu gaadhay. Gudoomiye Cabdikariim Sheekh Muuse ayaa ku nuux nuuxsaday innu ku faanayo kaalinta ay jaaliyadaha Ogadeniya ee qurbuhu kasoo hooyeen halganka lagu baadi goobayo xoriyada Ogadeniya. Isaga oo sheegay in maanta shacabka Ogadeniya uu heysto cudud ciidan oo Allaah mooye cid hor istaagi kartaa aysan jirin. Ciidanka JWXO maalinba maalinka ka danbeeysa waxaa noo sii kordhaysa awood iyo hanasho aan ku gaadhayno xoreynta dhulka Ogadeniya.
Naftii Hure Cabdi Kariim Sheekh muuse Guidomiyaha Xarunta dhexe ee JWXO waxa uu sheegay in lajabiyay cududi military ee taliska Ethiopia ka joogay dhulka Ogadeniya. taliska Ethiopia waa kaga adkaanay furimihii daggaalka waxaa ay sidaas awgeed soo dhoodhoobeen wiilal somaliyeed oo inala dhashay kuwaas oo lagu magacaabo hawaarin. mudadi hore waan u gogol badinay in ciidamada Hawaarinta ee somalida ah aan ka shaqeyno inaysan ku naf waayin xabada xoriyad doonka oo ku beegneyd gumeystaha. Markii aan u maareyn weynay waxaa qasaab nagu noqotay in aan daggaal ku qaadno hawaarinta oo noqday kuwo xabada la isaga dhiggo.
Gudomiyaha Xarunta dhexe ee JWXO ayaa sheegay sanadihi lasoo dhaafay in 10,000 (toban Kun) oo ciidanka Liyuu poiliska ah inay Ethiopia sameysay kuwaaso eega noqday wax dagaal lagu dilay, jajab iyo in fakatay. islamarkaasna in labur buriyay o ciidanka JWXO burburiyen dadkii loo yiqiinay hawaarinta. Maanta ma jiraan ciidan lagu magacaabo Hawaarin oo ka howlgala gudaha Ogadeniya, waxaase jira ayuu yiri Maleeshiyaad magacoodi huwan oo aan laheyn tababar ciidan, kuwaas oo loo dhisay inay si gabaad ah ku gumaadaan shacabka. Badankoodu Waxay ku sugan yihiin magaaloyinka waaweyn iyo goobaha saldhiga u ah militaryga halkaas oo jeelal dadka lagu ciqaabo horjoogayaal uga yihiin. Ma jiraan ciidan Hawaarin ah oo daggaal la galikara Ciidamada JWXO.
Gudomiyaha Xarunta dhexe ee JWXO ayaa ka waramay xaalada niyada shacabka Ogadeniya oo uu ku tilmaamay waqtigan inay joogto heerkii ugu sareysay. Dhibaato badan oo dil, dhac, kufsi iyo xasuuqba leh ayaa shacabka Ogadeniya soo gaadhay si loo niyad jabiyo balse shacabka Ogadeniya waxay sii qaadaan markasta oo la waxyeeleeyoba cadho iyo niyad wanaag ay u qabaan sidii ay uga hoos bixi lahaayeen gumeystaha danaha qalaad.
Abwaan Heelaale ayaa sidoo kale kamid ahaa Xubniihi sharafta badnaa ee khadka isgaadhsiinta tooska ah kaga qeybgalay Munaasabadan. Halgame heelaale ayaa gabayo tiro badan oo uu kaga waramayo isbadaladii halganka Ogadeniya ee qori isu dhiibka ahaa. Halgame Abwaan aya gabay ku sheegay in halganka JWXO wado yahay kii Axmed gurey, Sayid Maxamed Cabdile Xasan, halgankii Nasrullaahi, iyo WSLF soo hoggaaminayeen. Waxaa isbadala Magaca, sida labada wiil ee walaalaha ah midna Axmed midna Maxamed Loogu bixiyo ayay halgamadaas midkasta magac ugusoo bixinay laakiin dhamaantood hal u jeedo ayay wada lahaayeen. Halganka ONLF maanta hoggaaminayso waxa uu lamid yahay u jeedooyinkaas hore.
Gabaygii uu soo jeediyay Halgame Heelaale ayaa dadka aad u qiiro galiyay isaga oo kaba tagin habeen iyo dharaar soo martay shacabka, muragadii iyo farxadii, taariikhdii halgameed oo dhameystiran ayuu gabaygan cusub illaa maanta heerka lamarayo uu kaga waramay. Sidoo kale halgame Heelaale ayaa dhalinyarada Ogadeniya gabay cusub oo kale oo uu munaasabada sanad guurada JWXO ugu talo galay kula dardaarmay inay u diyaar garoobaan sidii ay u hanan lahaayeen xoriyada Ogadeniya oo iftiinkeeda lagaadhay.
Munaasabadan ayaa waxaa kale oo lagu soo bandhigay taariikhda Ogadeniya, Filimaan kawaramaya xaalada shacabka Ogadeniya, Filimaan Cusub oo Ciidanka JWXO laga soo duubay, iyo suugaan halgameed lasoo bandhigay.
Xaaji Cusmaan Badal, oo kamid ah Madaxda sare ee Hoggaanka Abaabulka jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa isna ka hadlay munaasabadan isaga oo ka waramay guulaha lagaadhay 29kii sanno ee ay JWXO soo hoggaaminaysay.
Cusmaan badal ayaa ciidanka JWXO ku amaanay guulaha ay kasoo hooyeen furinta hore isaga oo sheegay in ciidanka JWXO qab jabiyay gumeysiga Woyanaha oo ku guul dareystay inay masiirka ummada shacabka Ogadeniya siday doonaan ka yeelaan. Waxaan ku noolnahay sumcad iyo magac ku leenahay dhiiga naftii huraha, oo soo daadanayay qarni in kabadan. Shacabka Ogadeniya waligii isuma dhiibin cadow, waligeena gumeyste inagama adkaaan. Sidoo kale Xaaji Cusmaan ayaa amaan u soo jeediyay waxqabadka jaaliyadaha Ogadeniya ee dibada oo garoonki siyaasada kaalintoodi kasoo baxay. Waxaa guul innoo ah in qadiyadeena aqoonsi buuxda aan gaadhsiinay oo miisaska caalamka looga doodayo. Jaaliyadaha Ogadeniya maanta waa safaaradiihii Ogadeniya shirkasta oo caalmaku isugu yimaado ayay kursi ku leeyihiin. Dadaal dheeri ah isku tashi iyo midninada shacabkeena ayaa halkaas ina gaadhsiisay. si gaar ahaaneed masuulka HAAB waxa uu mahad naq usoo jeediyay jaaliyada London oo uu sheegay inay qeyb libaax leh ka qaadatay dhinaceeda.
Xubno kale oo badan oo kamid ah Jaaliyada ayaa sidoo kale munaasbadan ka hadlay iyaga oo Su’aalo toos u weydiiyay gudoimiyaha Xarunta dhexe ee JWXO oo bilow ilaa dhamaad si toos ah ugu jiray khadka isgaadhsiinta. Gudomiyaha Xarunta dhexe Naftii hure Cabdikariim ayaa si aad u niyad wanaagsan uga wada jawaabay su’alihi.
Munaasabada ayaa guul kusoo dhamaatay.
Jaaliyada ayaa sidoo kale iclaamisay kulan kale oo dhici doona 14 September 2013 oo Ajanabi, siyaasiyiin, ururada xuquuql insaanka iyo suxufiyiin calami ah kasoo qeyb gali doonaan. Kulankan oo aad u weyn waxaa looga hadli doona arriamah qaxootiga Somalida Ogadeniya.
Sidoo kale jaaliyada ayaa iclaamisay 1 November Ruwaayadi Ururka dhalinyarada Ogadeniya oo ka dhici doonta Magaalada London. Kulamo kale iyo waxqabad xoogan oo jaaliyadu wado ayaa lagu iclaamiyay, waxaana shirka xubnaha lagusii gorfeyn doona 31 August arrimo jaaliyada usii socday.